Jiro avo lenta
Led wash mihetsiketsika jiro
Loha mihetsika beam
Led manaraka jiro spot
Led profil jiro spot
Jiro par led
Jiro static hafa
Inventory, fetiben'ny mozika voalamina tsara any ivelany amin'ny 2021!
Rehefa nihatsara ny fironana ankapobeny amin'ny valan'aretina pnemonia satroboninahitra vaovao eran-tany, ny firenena vahiny sasany dia namaha tsikelikely ny fanaraha-maso ary nanokatra indray ny "dingana vaovao" amin'ny "famoahana". Nanomboka nampirisika ny hisian’ny hetsika goavana toy ny tou...
2021 Tmall Double 11 Carnival Night, dia mahafinaritra amin'ny fotoana sy ny habaka!
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-13
2021 Tmall Double 11 Carnival Night dia novokarin'ny Zhejiang Satellite TV Program Center Super Night Studio, miaraka amin'i Chen Xuewu ho tale jeneraly, ary miara-miasa amin'ireo ekipa an-trano ambony indrindra hamorona alina karnavaly mampiahiahy sy mahafinaritra BEYOND LIGHTING 150 sekely ...
Fitsidihana fampisehoana “Heavenly Foreign Objects” an'i Xue Zhiqian, dia mozika sci-fi mahery vaika
Ny 23 ka hatramin'ny 24 Oktobra, novokarin'ny "Tide Rock Music", nampiantranoin'ny "Taihe Music Group" ary novokarin'ny "A Show Bing". Ny fampisehoana roa voalohany amin'ny fitsidihana "Heavenly Foreign Objects" an'i Xue Zhiqian dia hatao any Suzhou. Feno olona ny kianjan’ny Sports Center ary nodakan’ny...
Fihaonambe 2020 UN Biodiversity COP15-CP/MOP10-NP/MOP4, Kunming, Sina
Fihaonambe 2020 UN Biodiversity COP15-CP/MOP10-NP/MOP4, natao tao amin'ny tanànan'i Kunming any Chine ny 12-15 oktobra 2021. BEYOND LIGHTING 300 Pieces 4019 (19x40W wash zoom moving head ) nahazo voninahitra handray anjara amin'ny fihaonambe. ...
Famolavolana sehatra tena mahavariana any ivelany!
Loka nasionalin'ny Televiziona 2021 Tratran'ny valan'aretina, nahemotra ny "Lokan'ny Televiziona Nasionaly 26", nokasaina tamin'ny volana janoary tany am-boalohany, ary natao tao amin'ny O2 ny 9 septambra 2021 farany teo. Tena...
Jereo ny fomba nahasarika mpankafy tsy tambo isaina ny China Pavilion tao amin'ny Dubai World Expo!
Ampitao fitahiana sy hanangona fahazavana! Sha Xiaolan, mpanolotsaina jeneralin'ny China Pavilion, no tale jeneralin'ny tale, ary novolavolaina sy novokarin'ny [Kolontsaina Fengshang] Light and Shadow Creative Design. Nahatonga mpizaha tany tsy tambo isaina hijery sy hankasitraka...
Kaonseritra Fetiben'ny Mid-Autumn any amin'ny faritry ny Greater Bay 2021
200pcs ankoatry ny jiro 6x60w pixel zoom bar mihetsiketsika miasa amin'ity fampisehoana ity 6 pixels 60W rgbw notarihan'ny taratra matanjaka sy loko tsara fanasan-damba fanasan-damba & Tilt infintied rotating Beam zoro: 3°-45° Aforitra farango napetraka refy: 64*...
"Conference National Treasure China" eo ambanin'ny jiro, tongava mivory miaraka amin'ny harem-pirenena! Mamaky an'i Shina avy amin'ny National Treasures, mahavariana ity seho ity!
Ny "Conference National Treasure Conference" dia fifaninanana fahalalana ara-kolontsaina sy fampirantiana lehibe novokarin'ny China Central Radio sy Television sy ny Fitantanan-draharaham-panjakana momba ny lova ara-kolontsaina. Mitondra ny lohahevitry ny “Fahafantarana an’i Shina amin’ny harem-pirenena”, ny fandaharana...
Jiro strobe feno loko LED azo ovaina mihoatra ny 2720!
Ny jiro mareva-doko eo amin'ny lampihazo dia manafintohina sy manaitra ny olona foana Ny zavatra resahina amin'izao fotoana izao dia jiro stroboskopika tsy misy rano izay mety ho strobe, mety ho lava mamirapiratra sy loko, ary azo ampiasaina ho jiro fisaka azo ampiasaina amin'ny dingana isan-karazany. , teatra, outdo...
Ny ran'ny mozika vaovao + ny fampifangaroana farany, mba hananganana ny fomba fijery izao tontolo izao momba ny "People from the Strawberry Planet"
Tena ilaina ny feo amin'ny fampisehoana mozika isan-karazany. Ny "People from Strawberry Planet" dia niaina sehatra an-tampon-trano, sehatra ady ary sehatra fampisehoana an-kalamanjana. Mba hahazoana antoka ny vokatry ny feo tany am-boalohany dia nanao ezaka be ny ekipan'ny feo. "Ny famolavolana horonam-peo amin'ny fampisehoana manontolo...
Hunan Satellite TV's New Trendy Good Night, manokatra ny sehatra teknolojia malaza
Hunan Satellite TV New Trend Good Night Ny 17 aogositra, ny "New Trend Good Night" izay noforonin'ny Hunan Satellite TV sy ny orinasa e-varotra Douyin dia tsy fety fotsiny, fa fampisehoana mivantana lehibe ihany koa. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny "Tide World" noforonin'ny fifandraisan'ny Taiwan sy...
Ny Zhejiang Satellite TV "Super 818 Carnival Night" dia misy fiantraikany mirehitra eny amin'ny habakabaka!
Ny Zhejiang Satellite TV "Super 818 Carnival Night" dia misy fiantraikany mirehitra eny amin'ny habakabaka! Ny "Super 818 Carnival Night" dia "alina" miompana amin'ny fiara navoakan'ny Zhejiang Satellite TV sy Auto App. Novokarin'ny Zhejiang Satellite TV Program...
Adiresy: Building B, Taiyangshen Industrial Park, Xiahua 1st Road, Baiyun District, Guangzhou, Shina
Fampandrosoana ny indostria